Fitsenana makotrokotroka :: Noraisin’ny Malagasy nanoatra noho ny tompondaka ny Barea • AoRaha
Malagasy, vahiny monina eto madagasikara an’alin-kisa no nanofahofa tanana sy nisaotra ny ekipam-pirenena malagasy taranja baolina kitra na barea tamin’ny fahatonga­van’ Izy ireo, ny sabotsy lasa teo.Tomefy olona ny arabe nolalovan’izy ireo hatreny anoloan’ny kianjaben’i mahamasina, nandraisan’ny filoham-pirenena azy ireo.Ora fito, izay tsy nampitaraina an’ireo mpankafy, no nanaovana io lalana io.Betsaka ny zavatra nisongadina sy nitranga tamin’izany.
Manoatra noho ny tompondaka. Nandritra ny adim-pamantaranandro fito no nanaovan’ny ekipam-pirenena Malagasy eo amin’ny taranja baolina kira na ny Barea ny lalana avy eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato nihazo ny kianjaben’i Mahamasina, ny sabotsy lasa teo. Avy niatrika ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019 tany Ejypta, ka nihintsana teo amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana, izy ireo. Hoby, horakoraka, tehaka narahina hafaliana no nasetrin’ireo vahoakan’ny renivohitra sy ny manodidina azy ireo, teny an-dalana rehetra teny. Tsy nahasakana an’ireo olona te-hahita maso mivantana ny Barea ny fiovan’ny lalana
tamin’ny fotoana farany.
Kiririoka, anjombona, hirahira, horakoraka narahina lamako sy tehaka no noentin’ ireo teny an-dalana nihobiana an’ireto maherifon’ny firenena ireto. Sambany rahateo teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra afrikana no nisy firenena nandray anjara voalohany saingy tafita niatrika ny ampahefa-dalana. Toa tsy nahatsiaro hatsiaka sy haizina ireo olona sasa-niandry ny Barean’ i Madagasikara, teny amin’ny lalana nolalovan’izy ireo. Fifa­nosehana sy fisisihana te-hahita an’ireo mpilalao no hita teny rehetra teny.
Filoha niandry Barea
Isan’ireo niandry ny fahatongavan’ireto maherifo ireto, teny Mahamasina, nandritra ny adim-pamantaranandro maro ny
Filoham-pirenena mivady sy ny Praiminisitra ary ireo mpikambana maro teo anivon’ny gover­nemanta. Tamin’ny 7ora 18 minitra no nigadona teny Mahamasina ny Filoha, Andry Rajoelina mivady, nefa tamin’ny 10 ora sy 30 alina vao niditra teny Mahamasina ry Faneva Ima sy ny namany. Mbola teny amin’ ny lalam-baovao Tsarasaotra ny ekipam-pirenena Malagasy tamin’io fotoana nahatongavan’ ny Filoha teny Mahamasina io. Tamin’ny 11 ora alina no nanga­taka ny hihirana ny hiram-pirenena Malagasy ity kapitenin’ny Barea ity ary dia nanakoako teny amin’ny manodidina izany na dia tsy nisy feon-kira aza.
Saika tsy tafavoaka
Nanahirana an’ireo mpilalaon’ ny Barean’i Madagasikara ny nivoaka ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen Ivato, ny sabotsy lasa teo, noho ny ha­ma­roan’ny olona tonga nitsena azy ireo teny. Tsy navoaka raha tsy tany amin’ny 1e RFI ireo Barea ary tsy nanaiky ny olona raha tsy nahita maso azy ireo. Vokany, nirodana ny fefy teny amin’ny seranam-piaramanidina vaovaon’Ivato. Naharitra ora maro no nanalan’izy ireo ny lalana avy eo amin’ny seranam-piaramani­dina nihazo ny fivoahana amin’ ny lalam-baovao Tsarasaotra.
Fianjerana sy fahatoranana
Teny an-dalana dia nitrangana loza tampoka ny fiara nitondra ireo mpilalaon’ny Barean’i Mada­gasikara. Nisy moto nanapaka tampoka teo alohan’ilay fiarabe, ka nianjera avy teny ambony i Ibrahim Amada, irakiraka mpiaro izay nahafaty baolina tsara indrindra nandritra ny CAN (Top 1). “Tsy dia naninona aho fa ny tongotro no nisy faharatrana kely”, hoy ity mpilalao Malagasy milalao any Alzeria (MC Alger) ity, tamin’io fotoana io. “Efa tsy maninona ny tongotro amin’izao fotoana izao”, hoy izy, omaly,
teny amin’ny trano fandraisam-bahiny Louvres nipetrahan’izy ireo.
Isan’ireo tranga nampalahelo sady nampihomehy ny maro ihany koa ny fahitana tovovavy iray, 19 taona, torana tao anaty vahoaka. Nahita an’i Adrien Melvin ity tovovavy ity, araka ny voa­laza, ka tsy nahatana intsony ny fihe­tseham-pony. Maro amin’ireo vehivavy Malagasy, rahateo, no mitsiriritra an’ity mpiandry tsato­kazon’ny Barea, milalao any Frantsa (Fc Martigues), ity.
Teo am-pahatongavana teny Mahamasina dia mbola nisala­sala ny amin’ny mety haha mpanazatra nasionaly azy amin’ny fitondrana ny Barean’i Madagasikara hiatrika ny CAN 2021 i Nicolas Dupuis, teknisiana Frantsay nametraka tantara ho an’ny baolina kitra malagasy. “Mientana ny foko nahita ireo Malagasy maro niara-nirona tamin’ny Barea saingy mbola tsy fantatro na hijanona ho mpanazatra nasionaly aho na tsia”, hoy izy. Taoriana kelin’io anefa dia nanaiky ny hitondra ny ekipam-pirenena Malagasy ao anatin’ny efa-taona indray ity mpanazatra ny klioba frantsay, FC Fleury 91, ity rehefa nanontaniana ampahibemaso ireo mpankafy baolina kitra tonga teny Mahamasina ny amin’ny mbola hitazomana na tsia azy.
Ankoatra izay dia isan’ireo nampanantenaina teny an-toerana ihany koa ny fanavaozana ny kianjaben’i Mahamasina. “Ho­volena bozaka manara-penitra sy hatao hahazaka mpijery mano­didina ny enina alina ny kianjaben’i Mahamasina”, hoy ny Filoha Andry Rajoelina.
Nanakoako teny Mahama­sina sy ny manodidina ny hiram-pirenena, nohiraina ireo andininy telo, tamin’ny alin’ny sabotsy lasa teo. Efa tamin’ny 11 ora alina no noredomin’ireo tonga teny an-toerana ny “Ry Tanindrazanay Malala”, rehefa nangataka ny fiaraha-mihira amin’ ireo mpanohana i Faneva Ima Andriatsima, kapitenin’ny Barean’ i Madagasikara. Tsy nasiana feon-kira ny fihirana azy fa natao “acapela” saingy toa nampihetsi-po ny maro. Sambany rahateo teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra no nohiraina tamin’ny
misasak’alina teto an-toerana izany hiram-pirenena Malagasy izany. Saika tany ivelany hatrany no nanaovana izany. Isan’ireny ny lalaontsika sy Guinée tany Alexandrie, Ejypta, farany teo.
Nitohana tsy nisy toy izany ireo lalana rehetra nifandray tamin’ny lalana nizoran’ny Barean’i Madagasikara, ny sabotsy lasa teo. Isan’ireny ny teny amin’iny Ambodivona sy Andranobevava hihazo an’Ankorondrano iny, ny teny Soavimasoandro hatreny Morarano sy Anosivavaka, ny teny Analakely sy Mahamasina ary Anosy. “Voatery mitady lalana hafa izahay rehefa hanatitra olona amin’ireo toerana ireo. Nampiakatra ny saran-dalana ny fisian’ireo fitohanana lavareny tao anatin’ny ora maromaro ireo”, hoy i Zo, mpamily taksy. “Voatery niangavy an’ireo olona mihitsy izahay mba handeha teny Analakely satria dia rakotra olona tanteraka izany”, hoy hatrany izy. Vitsy dia vitsy ireo taksibe niasa, vokatr’ izany. Hany ka maro ireo olona no nitangorona teny amin’ireo toeram-piantsonana nandritra ny fotoana naharitra. “Tsy maintsy mody izahay ka ny tsy fisian’ny taksibe no nahatonga anay
handeha an-tongotra maromaro toy izao”, hoy i Seheno, mponina eny Analamahitsy namonjy teny Analakely.
Sambany teto Madagasikara, indrindra Antananarivo, no nisy fivorian’olona maro an’aliny tsy nahitana loza nahafatesana na naharatrana olona. “Tsy nisy ireo olona namoy ny ainy na naratra mafy tonga teto amin’ny hopitaly”, araka ny nambaran’ireo mpitsabo mpiandry raharaha teny amin’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Ampefiloha). Saika feno an’ireo mpitsabo misahana ny vonjitaitra rahateo teny rehetra teny.
Kiririoka, anjombona, hirahira, horakoraka narahina lamako sy tehaka no noentin’ ireo teny an-dalana nihobiana an’ireto maherifon’ny firenena ireto. Sambany rahateo teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra afrikana no nisy firenena nandray anjara voalohany saingy tafita niatrika ny ampahefa-dalana. Toa tsy nahatsiaro hatsiaka sy haizina ireo olona sasa-niandry ny Barean’ i Madagasikara, teny amin’ny lalana nolalovan’izy ireo. Fifa­nosehana sy fisisihana te-hahita an’ireo mpilalao no hita teny
Baolina kitra- Federasiona :: Andrasana ny famoahana ny lisitr’ireo kandidà hofidiana filohan’ny FMF
Fiainana mpilalaon’ny barea :: “Efa safidy fony kely ny ho mpilalao matihanina”, hoy i Melvin Adrien